News | noon
News | Tag: noon
धेरै नुनिलो खाना खाँदा स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ ?
एजेन्सी । यदी तपाई खानामा आवश्यकताभन्दा बढी नुन खानुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् । धेरै नुनिलो खाना खाने बानीले तपाईलाई मुटुको रोगी बनाउन सक्छ ।
धेरै नुनिलो खानाले बनाउन सक्छ तपाईलाई मुटुको रोगी
यदी तपाई खानामा आवश्यकताभन्दा बढी नुन खानुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् । धेरै नुनिलो खाना खाने बानीले तपाईलाई मुटुको रोगी बनाउन सक्छ ।
नुन पानीले किन नुहाउने
नुन कत्तिको चर्को खानुहुन्छ ? होस गर्नुहोस् अधिक नुन खादाँ स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ
एजेन्सी । अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार अधिक मात्रामा सोडियमको सेवन आत्मघाती हुनसक्छ ।